Semalt Inopa 5 YeWeb Best Web Zvigadzirwa Zvokushandisa
uye inotora mashoko anobatsira kune vashandisi. Zvinogona kunge zvisingabviri kutsvaga zvakakodzera web scraping software kana chigadziro sezvo pane zvakawanda zvekusarudza kunze uko. Zvisinei, mamwe mapurogiramu anoda unyanzvi hwekodhi hwekodhidhi apo mamwe acho anodhura, uye haana kukodzera kutanga.
Pano tataura nezve 5 best web scraping software yekutengeserana uye isiri yekushandisa.
1 - o que colocar no meu blog. Ficstar:
Ficstar ndiyo inhare yebasa iri paIndaneti iyo haifaniri iwe kusanganisa nekuvandudza data yakashata. Pane kudaro, inozivisa, inotsanangura, uye inoronga data kwauri: iyo inofanidza uye inofanidza zvigadzirwa nemashandisirwo emhando dzakasiyana siyana dzewebhu. Kushandisa Ficstar, haufaniri kutarisa marekodhi kana kuunganidza dhesi re data sezvo ichaita zvose maererano nemirayiridzo yako uye zvinoda. Kubva mu-e-commerce uye mawebhusayithi ezvitoro kusvika kune zvinyorwa zvepaIndaneti, iyi software inogona kubvisa zvinyorwa zvose zvekutsvaga, zvichiita kuti titarise mhinduro dzakazara kunze kwekutsvaga.
iWeb ndiyo inyanzvi uye yakavimbika yevashandi nevasiri vashandi..Inotibvumira kuratidza webhusaiti kana bhulogi, kuongorora tsanangudzo yekubvisa, kutarisa uye kuongorora hutano, uye kubhadhara mari kana basa redu richiitwa maererano nezvido zvedu nezvatinotarisira. Kana iwe uri kutanga, iwe haufaniri kunetseka pamusoro pemutengo wayo sezvo iWeb isingakutengi iwe kudarika $ 40 pamwedzi. Icho chiri chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvemigodhi uye zvinyorwa zvinyorwa zvekushandisa paIndaneti.
TheWebMiner inonyanya kushandiswa kwekambani yewebhu yakapa software yezita rimwe chete. Iyi purogiramu ine simba inoshandisa yakawandisa dhenda nguva imwe neimwe, uye inopa maitiro ekugadzirisa uye kubvunzurudza kune vashandisi vayo. Hazvina mhosva kuti iwe unotsvaga deta ipi, TheWebMiner ichazadzika zvaunotarisira. Kubva pane imwe nguva-kudhonza dheinheti kunowanikwa kumishumo yezuva nezuva kana zvarudzo pamusoro pemakwikwi mumusika, iyi software ichakupa iwe marudzi ose ehuwandu. Zvimwe zvezvakanakisisa zvinosarudzwa zvinoratidza nhamba, nhamba yakaoma yedhadhareji, uye chimiro chekuzivikanwa.
Sezvakaita TheWebMiner, WebSundew inesimba uye inoshamisa yewe web scraping program yezvinhu zvose zvekutengeserana uye kwete zvekutengeserana. Inobatsira kubvisa tsvaga kubva kune mawebhusayithi uye nekukurumidza nekubudirira. WebSundew inotibvumira kushandura nzira yekubudiswa kwedata uye kuchengeta ruzivo zvose zviri paIndaneti uye pasina. Vashandi vepurogiramu ino vanoziva kuti WebSundew inogona kuunganidza, kuongorora uye kuvhara mawebsite akawanda asina unyanzvi hwekodhi.